Midowga Yurub oo €286 Milyan ugu deeqay Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Midowga Yurub ayaa maanta xaqiijiyay in uu Soomaaliya ugu deeqayo lacag gaaraysa €286 milyan oo lacagta Midowga Yurub ah, taasoo loogu talagalay ilaa sanadka 2020-ka, lacagtaas oo qeyb ka ah caawimaad gaaraysa €3 bilyan oo loogu deeqay dalalka Geeska Afrika.
Lacagta loogu deeqay gobolka oo ka imaanaysa Sanduuqa Horumarinta Yurub ee 11-aad barkeed waxaa isticmaali doona hay’adaha gobolka.
Midowga Yurub wuxuu taageeraa nidaamka dowlad-dhisidda Soomaaliya, Howlgalka Nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), tababarrada ciidamada Soomaaliya iyo la-dagaallanka burcad badeedda.
Gobolka Geeska Afrika ayaa lagu wadaa inay booqasho ku yimaadaan agaasime ku-xigeenka kumishinka Yurub ee agaasinka howlaha horumarinta iyo iskaashiga, Marcus Cornaro iyo wakiilka gaarka ah ee Midowga Yurub ee Geeska Afrika, Alexander Rondos.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Midowga Yurub socdaalka mas’uuliyiinta wuxuu qeyb ka yahay howlgal wadaag ah oo ay ku lug leeyihiin Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-Moon, Madaxa Bankiga Adduunka, Jim Yong Kim, Madaxa Bankiga Horumarinta Islaamka, Axmed Maxamed Cali Almadani iyo guddoomiye ku-xigeenka komishanka Midowga Afrika, Erastus Mwencha.
Waxay safar ku tagi doonaan dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Jabuuti iyo Kenya halkaas oo ay kula kulmi doonaan madaxweyneyaasha iyo wasiirrada dowladahaas iyo xubno ka socda ururrada bulshada si ay uga doodaan caqabadaha iyo iskaashiga mustaqbalka ee gobolka Geeska Afrika.
Midowga Yurub wuxuu ka taageera dalalka Geeska Afrika arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. Wuxuuna tan iyo sanadkii 2011 ugu deeqay gobolka kaalmo bini’aadannimo oo dhan €1 bilyan.